in la ogaado caqabadaha hadda jira iyo kuwa mustaqbalka,
kala furfuro dhinacyada sharci dejinta ee la xidhiidha dhaqdhaqaaqa,
in la sameeyo dulmar guud oo ku saabsan jilayaasha maamulka, xalalka, iyo sidoo kale kharashaadka iyo ilaha dhaqaale ee dhaqdhaqaaqa,
deji walxaha la xidhiidha raridda alaabta.
Isbeddelka siyaasadda gaadiidka dadweynaha oo loo beddelo siyaasadda dhaqdhaqaaqa dadweynaha, caqabadaha siyaasaddan dadweynaha, soo bandhigida LOM, qalabyada iyo hindisayaasha jira, MOOC waxay ku siin doontaa aqoonta lagama maarmaanka ah si aad u fahamto caqabadaha hadda jira iyo hindisayaasha jira si aad uga jawaabto. .
Siyaasadda gaadiidka dadweynaha? Siyaasadda dhaqdhaqaaqa dadweynaha? Janaayo 17th, 2022Tranquillus
READ Bilaash: Sida loo abuuro Micro-Business khadka tooska ah
horeDhulalka iyo horumarka: aynu beddelno wakhtiyada!
socdaLacagaha HOGAAMIYAHA Yurub